Maamulka Gobalka Banaadir oo farriin u diray Shacabka Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maamulka Gobalka Banaadir oo farriin u diray Shacabka Muqdisho
Maamulka Gobalka Banaadir oo farriin u diray Shacabka Muqdisho
Guddoomiye Ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Axmed Xassan Iimaan ayaa shir guddoomiyay kulan aan caadi aheyn oo looga hadlayey dar dargelinta, sare u qaadista dakhliga Dowlada Hoose ee Xamar iyo qaadista Canshuuraha Guryaha.
Shirkaan oo ay ka qeyb galeen Guddoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir iyo Agaasimayaasha qaabilsan dakhliyada Dowladda Hoose ayaa waxaa baaq loogu diray shacabka ku dhaqan Gobolka Banaadir in ay noqdaan Canshuur bixiyeyaal.
Sidoo kale inay ka Shaqeeyaan dib u soo celinta bilicdii Caasimadda si wax looga qabto adeegyada aas aasiga ah ee Bulshada u baahan yihiin sida; Waxbarashada, Caafimaadka, Nadaafada iyo dhismaha Kaabayaasha Muhiimka ah.
Shacabka Gobolka Banadir ayaa waxaa ay yihiin kuwa ugu badan ee Canshuurta siiya Dowladda gaar ahaan Maamulka Gobolka Banaadir, hayeeshee taasi bedelkeeda aysan helin adeegyadii ay u baahnaayeen.